Maninona no misy mpanao ampinga 542 ao amin'ny Amazon | Martech Zone
Misy 542 ny akondro mihantona ao Amazon… manomboka amin'ny $ 5.57 ka hatramin'ny $ 384.23. Ny mpanantona akondro tsy lafo vidy indrindra dia farango tsotra izay apetakao ao ambanin'ny kabinetranao. Ny hanger akondro lafo vidy indrindra dia ity tsara tarehy ity Hanger akondro Chabatree vita tanana izany ary vita amin'ny loharanon-kazo maharitra.
Matotra… Nojereko izy ireo. Nanisa ny valiny aho, nandahatra azy ireo tamin'ny vidiny, ary avy eo nanao taonina iray taonina hanger akondro fikarohana.
Dieny izao dia manontany ianao… Inona no ifandraisan'izany amin'ny teknolojia marketing… lasa ianao akondro? (Ie, hoy aho!)
Tsia, ity dia lahatsoratra tsotra iray miresaka ny fanavaozana ny vokatra, ny safidin'ny vokatra ary sanda tsapa - ary koa ny fomba fivarotana ny tenanao, ny vokatrao, ary ny serivisinao. Toy izany koa, amin'ny maha orinasa anao, mila ataonao laharam-pahamehana ny fikarohanao ny vahaolana manaraka.
Ny hangeran'ny akondro dia manana tanjona tokana ary tanjona iray ihany… ny manantona akondro mba tsy hipetrahan'izy ireo ambonin'ny tany ary ho mora maratra. Mahagaga fa ny patanty vao 20 taona monja. Fanamarihana… ny pataloha Bruce Ancona dia nanatontosa paty ihany koa ilay mitazona lamba famaohana taratasy… toa bandy mandany fotoana be ao an-dakozia mieritreritra hoe aiza no hametrahana entana. Miverina any amin'ny mpanantona akondro,…
Nandritra ny roapolo taona lasa izay, ny fihantonana akondro dia tsy nanjary nahavariana noho ny tamin'ny fotoana nametrahan'i Bruce ny patanty tany. Ny hangeran'ny akondro rehetra eny an-tsena dia samy manana ny tanjony… mba hampihenana ny mangana ny akondro anao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny sarobidy ny hanger tsy niova. Nandritra ny herinandro vitsy lasa izay dia naharitra roapolo taona lasa ny akondro anao… ary mahatonga azy ireo haharitra anio ihany.
Ka maninona ny olona no mandoa vidiny isan-karazany ho azy ireo? Satria ny mpividy tsirairay dia manana sanda heverina fa tsy mitovy. Ny olona sasany dia maniry ny hahamety ny fihantonan'akondro izay tsy mandray ny haben'ny kaontera, ka izy ireo no handoa ny maodelin-kaontera ambany. Ny hafa dia hankasitraka ny fametahana vilia baolina ho an'ny voankazo hafa. Ny hafa dia handoa arakaraka ny akora sy ny mety hisehoany tsara ao an-tranony. Ary… na izany aza, ny hafa handoa $ 384.23 hanohanana ireo vokatra maharitra sy mpanakanto ao an-toerana izay nanao kanto ho an'ny lakoziananao.
Rehefa mieritreritra momba ny vokatrao na serivisinao ianao dia mety tsy mandefa vokatra izay tsy manome lanja bebe kokoa na latsaky ny mpanjifanao. Izany no antony maha-kritika azy tanteraka ny mahatakatra ny fanomezan-danja azy ireo ny vokatrao na serivisinao. Indraindray dia mila manabe azy ireo ianao mba hanampiana azy ireo hahatakatra ny antony mahatonga ny vokatrao na serivisinao mety ho lafo kokoa (na latsaka) noho ny mpifaninana aminao. Samy manao hanger akondro ny tsirairay.
Manana namako iray izay niasa ho CEO tamin'ny fanombohana nandritra ny taona maro. Tsy zaka ny adin-tsaina nahazo azy. Nasainy nanery azy isan'andro ny mpampiasa vola, nanosika fisongadina vaovao ireo mpanjifa, mpamorona izay voaray avy amina orinasa hafa, ary nahatsiravina ny fidiram-bolany rehefa nanandrana nitambatra ireo sombin-javatra rehetra izy ary nampivelatra ny fahitany vaovao. Tsy nahomby ny orinasany satria lany vola izy tamin'ny farany ary tsy zakany intsony ny mandray ny talenta ilaina hanaterana azy.
Taona maro taty aoriana dia nihaona taminy hisotro kafe aho ary nanontaniako azy hoe inona izao no ataony. Namaly izy fa manana orinasam-pamahana bozaka izao. Nanitatra nanomboka ny fanapahana ny bozaka ho an'ny ekipa maro izy ankehitriny. Nanao zavatra mahafinaritra izy, tsy dia niady saina loatra, niasa teny ivelany, ary tiany izany.
Taitra aho… nanomboka tamin'ny mpandraharaha fanavaozana sy fanombohana teknolojia ka hatramin'ny fanapahana bozaka?
Ny valiny, ny mitombo hatrany ny ahitra.
Salama tsara izy izao ary miroborobo ny orinasany. Na eo aza ny toekarena, ny vondrom-bola fampiasam-bola, ny fitsipiky ny governemanta ary ny fifaninanana… ny ahitra dia tsy mitsaha-mitombo ary afaka manangana sy mampitombo (hehe) ny fifandraisany izy rehefa manome serivisy manara-penitra. Tsy misy zava-baovao, manome asa mafy fotsiny sy valiny tsara amin'ny olana iray izay nanjo anay nandritra ny zato taona.
Raha ny marina dia miasa amin'ny sehatry ny sehatry ny orinasa izahay izay iasan'ny mpilalao fototra miasa mafy mba hahazoana sy mampiditra vokatra sy endrika vaovao, fa ny toetrany dia ao ambadiky ny indostria. Izy ireo dia mifantoka amin'ny famolavolana ny zavatra lehibe manaraka handroahana ny varotra, raha toa kosa ka mamela azy ireo ny mpanjifany hahita vahaolana tsara kokoa izay matetika kokoa dia lafo kokoa.
Ny fanavaozana dia tsy ilaina foana amin'ny fampandehanana orinasa mahomby.
Betsaka ny mpanantona akondro. Raha mihantona amin'ny valizy ny sasany, ny sasany manisy lovia voankazo, ary saika ny endrik'izy ireo kely dia kely daholo… mitovy ny zavatra nataony. Saingy, ampy ny fangatahana avy amin'ny mpanjifa mba hahalalan'ireo orinasa ireo ny tsena ary manomboka mivarotra ny vahaolana any izy ireo.
Tsy misy hafa ny orinasanao. Misy vokatra sy serivisy mifaninana hafa afaka manao izay ataonao. Mety hanao tsaratsara kokoa aza izy ireo. Midika izany fa, amin'ny maha mpivarotra anao, dia mila mahay manabe ny mpihaino anao ianao hoe maninona ianao no mety aminy. Ary izany koa no antony, amin'ny maha mpivarotra anao, dia tsy maintsy ataonao antoka fa ekena ny fahefanao amin'ny indostriao ho toy ny mpividy mandinika ny fahafahan'ny orinasanao manolotra ireo vokatra sy vahaolana ireo.
Ny fahasamihafana misy na ny olona mividy hanger akondro iray na amin'ny Amazon iray hafa dia tsy misy ifandraisany amin'ny akondro mijanona ho vaovao sy mbola tsy niteraka ... samy manao an'izany daholo izy ireo. Ny fahasamihafana dia eo amin'ny naoty, famerenana, famaritana ary famolavolana ny vokatra. Amin'ny maha mpivarotra anao, eo no tokony handanianao ny fotoananao - amin'ny fomba mahomby -barotra ny vokatrao sy ny serivisinao… ny naoty, hevitra, famaritana, ary ny endrik'ireo vokatrao sy serivisinao.
Manaova asa marketing tsara kokoa, dia hifandray amin'ireo mpanjifa maniry ny vokatrao sy ny serivisinao ianao.
Vokatra sy serivisy marketing dizitaly
Ao amin'ny vondrom-piarahamonina marketing nomerika, manana fahazarana mahatsiravina izahay ny mitady mandrakariva ny sehatra bala volafotsy manaraka na fantsona izay hamaha ny olantsika rehetra. Fa ny sasany amin'ireo orinasan-teknolojia avo lenta sy avo lenta indrindra dia tsy tena nanavao velively. Nahita ny fangatahana fotsiny izy ireo ary nanamboatra ny fomba tsara indrindra amin'ny varotra fa izy ireo no vahaolana tsara indrindra amin'ny sanda tsara indrindra.
Azonao atao ny mividy boky na aiza na aiza, fa i Amazon kosa niainga. Azonao atao ny mividy kiraro na aiza na aiza, fa i Zappos kosa nanainga. Azonao atao ny manangana tranokala misy sehatra rehetra, saingy niainga ny WordPress. Afaka nitanisa ohatra an-jatony na an'arivony aho.
Tsy milaza aho fa tsy manavao ireo orinasa ireo… marihiko fotsiny fa mitovy ny valiny. Nahazo boky ianao, nahazo kiraro, na nanangana tranokala. Mino aho fa tonga tamin'ny orinasany ny habetsahana, ny fankatoavana ary ny fitomboana… vao afaka nanam-bola hampiasa vola amin'ny fanavaozana izy ireo.
Ny lanja sy ny fanavaozana ny orinasanao
Rehefa mijery ny indostriao ianao, ny valiny dia mety tsy ny fanaovanao zavatra manavao kokoa na fanomezana serivisy fifaninanana izay tsy dia lafo loatra.
Ny mpanjifa sy ny orinasa dia samy manana ny olana sedrain'izy ireo isan'andro izay tadiavina vahaolana fotsiny. Na manantona ny akondro, na mandeha ho azy ny fanoratany, ny endriny, ny fankatoavany ary ny famoahana ho an'ny bilaogin'izy ireo manaraka. Misy ny olana, misy ny fahasosoran'izy ireo, ary efa azon'izy ireo ny lanjan'ny vahaolana.
Tsy mila fiasa iray hafa ianao, ny fanavaozana manaraka, na teboka hafa raha misy ny fangatahana ary ekena ny sandany. Mampifantoka ny sainao amin'ny olana lehibe ateraky ny vokatrao sy ny vahaolana.
Ny fanavaozana sy ny sandan'ny vahaolana tadiavinao
Miara-miasa amin'ny orinasa iray izahay izao izay nanisy marika fotsy ny vokariny ho an'ireo mpivarotra antsinjarany. Miaraka amin'ny areti-mandringana, ny fanidiana, ary ny firodanan'ny fivarotana manaraka, dia hitan'izy ireo fa mila mampiditra safidy ecommerce mivantana amin'ny mpanjifa izy ireo. Tsy dia mahay loatra ara-teknika izy ireo, ka nitady vahaolana ary nanomboka niresaka tamin'ny solontenan'ny mpivarotra amin'ny mpamatsy varotra samihafa.
Rehefa avy nijery ny zavatra azo atao rehetra izy ireo dia nanolotra azy ireo ny vahaolana tsara indrindra eo amin'ny tsena. Izy io dia afaka refesina tsy misy fetra, nanolotra fanohanana amin'ny fiteny maro, nanana fanakambanana tsy tambo isaina, kajy iraisam-pirenena momba ny hetra, nanana motera AI namboarina ary afaka mitantana an-tapitrisany SKUs. Namidy izy ireo… vonona hampiasa vola an'arivony maro amin'ny fahazoan-dàlana ary mbola bebe kokoa amin'ny fanakaramana anay hampihatra ny vahaolana ary hampiditra azy io amin'ny sehatra marketing an'izao tontolo izao.
Niresaka an'izany tamin'izy ireo izahay.
Na dia mety ho ny vahaolana tsara indrindra sy nahavariana indrindra teto ambonin'ny planeta aza izany dia azo inoana fa hampihemotra azy ireo na ho folo taona alohan'ny hahitan'izy ireo fiverenana amin'ny fampiasam-bola. Tsy nanana afa-tsy vokatra 75 izy ireo… vola kely ho an'ny sehatra ecommerce hikirakira. Ary izy ireo dia tsy hivarotra afa-tsy any Etazonia mandritra ny taona voalohany. Ny bala volafotsy dia hamono azy ireo.
Ny torohevitray dia ny hampiasa vola amin'ny fikarohana sy ny marika, avy eo hametraka vahaolana tsotra sy ivelan'ny talantalana miaraka amin'ny sehatra automatique marketing izay ahafahanay mifantoka amin'ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena sy ny fitondrana ny varotra ny vokatr'izy ireo. Mila fanantonana akondro ol mahazatra fotsiny izy ireo… tsy misy hafa.
Rehefa mijery ny orinasanao ianao, ny mamantatra ireo teboka fanaintainana ao anatin'ny fikambanana misy anao izay mety hanampy anao hahay mahomby sy mahomby kokoa ny teknolojia dia mety tsy mila vahaolana lafo vidy na manavao. Mety ho sehatry ny rindrambaiko mamoaka, manova ary mameno angon-drakitra mamonjy anao mandritra ny ora maro amin'ny asa hafa eny an-dàlana io.
Ataovy mitovy amin'ny mpanjifanao ny fandalinana… aiza ny fahasosoran'izy ireo sy ny banga amin'ny fomba ahafahanao manompo azy ireo ary mampifaly azy ireo?
Ny vahaolana dia mety sady tsy lafo no tsy teknika. Misy antony ny fisian'ny 542 mihantona akondro ao Amazon… misy olona an-taonina maro mividy azy ireo ary orinasa marobe manatanteraka tsara ny fangatahana. Ary ny vidiny dia miova arakaraka ny sanda hitan'ny mpanjifa.
Tags: Amazonmpanantona akondrosanda tsapasafidy vokatrafanavaozana ny vokatravarotra vokatraproduct reviewssandan'ny vokatrasarobidy